Mazwi eShamiso iro rinotsanangurwa izwi rekutsvaga mutambo | IPhone nhau
Dzimwe nguva kutsvaga mutambo wakasarudzika uyo unotigonesa "kufunga" zvishoma hakusi nyore pakati pezvakasiyana siyana. Mune ino kesi, isu tanga tichitaura nezvemutambo Mashoko eZvishamiso (WOW) kwenguva yakareba, iyo isiri chinhu chinopfuura mutambo unonakidza kwazvo watinofanira kutsvaga izwi. Mashoko Ezvishamiso ane vhezheni ye iPhone kana iPad uye isu tinogona kutaura kuti iwo mutambo uyo vanhu vakuru, vana, vakuru, nezvimwe, vanofarira kuyedza kuvhara aya mazwi ekutsvaga.
Nyowani vhezheni 2.0.3 inowanikwa
Mune ino kesi, mutambo zvakare unogashira iyo yekuvandudza iyo iyo yavanowedzera maficha matsva mumutambo pamwe nevakawanda vhezheni vhezheni kuti iwe ugone kugovana zvinetswa neshamwari dzako (sekureba sekunge iwe uri pasi peiyo imwechete network yeWiFi), wedzera imwe mari mukati Kutsvaga kweshoko pamwe neakajeka dhizaini, zvakare wedzera nyika nyowani uye kusvika pamatanho matsva zana nemakumi mana.
NaWoW tichakwanisa kufamba tichitenderedza pasirese patinoenda nematanho uye zvakare tinobvumidza mushandisi kudzidzira uye kudzidza mitauro sezvo tichigona kutsvaga kapfupi asi kwakasimba kweshoko mumitauro mishoma: Sipanish, chiCatalan, Chirungu, chiDutch, chiFrench, chiItaly nemimwe mitauro.
Izvo ndezve kuenda kuburikidza nematanho ekuzadza mune diki asi "akaomarara" mazwi ekutsvaga uye nekuenderera isu tichifambira mberi mumutambo zvakanyanya kuomarara. Tine zvimwe zvinotipa mukana watinogona kushandisa mune dzimwe nguva asi semumitambo yese yemahara yekurodha pasi idzo njanji dzinotengeswa munguva pfupi uye kana tichida zvimwe isu tinofanirwa kuenda kunotora. Mune iri jusi isu zvakare tine Pro vhezheni iyo inotidhura isu 4,49 euros
Mazwi eZishamiso: Alphabet Soupvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Store » Mazwi eShamiso iro rekupedzisira izwi rekutsvaga mutambo
Apple Inoburitsa Trailer YeGwaro Remafirimu 'Vanababa'
Scanner Pro inogadziridza kubvisa mimvuri otomatiki